Kedu otu na esi emeso coccidiosis na ọkụkọ - Ọrịa ọrịa - 2019
Kedu otu na esi emeso coccidiosis na ọkụkọ
Ọkụkọ, dị ka ọkụkọ okenye ma ọ bụ ụdị anụ ọkụkọ ndị ọzọ, nwere ike ibute ọrịa dị iche iche. Otu n'ime ọrịa kachasị egwu nke ọrịa bụ coccidiosis.
Ka anyị lebakwuo anya n'ihe bụ coccidiosis, ihe mere o ji emee na otu esi enyere nnụnụ aka ịkwụsị ọrịa a.
Mgbaàmà na ọrịa nke ọrịa ahụ
Otu esi emeso coccidiosis n'ime ọkụkọ
Video: coccidiosis na ọkụkọ, ọkụkọ
Nzaghachi site n'aka ndị ọrụ netwọk
Kedu ihe bụ coccidiosis
Coccidiosis bụ parasitic ọrịa nke kpatara unicellular pests nke coccidia. Ọrịa ahụ nwere aha mara mma bụ "Eimeria Tenella" na-abanye n'ime eriri afọ nke ọkụkọ ndị na-eto eto ma metụta ha na ọrịa a. Ọrịa a na-ahụkarị n'etiti ọkụkọ, ọbọgwụ, turkeys na geese.
Mụta ihe ọkụkọ, turkeys na geese na-arịa ọrịa.
Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ọnyá coccidiosis na mmiri na ọkọchị, mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'èzí. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ahụ ruo ọnwa atọ kachasị na-arịa ọrịa a, ebe ọ bụ na enwebeghị ike imeri ọrịa ha.
Ị ma? Chickens nwere nnọọ amamihe karịa ha na-eji eche echiche. Ndị okenye nwere ike iburu ihe dị ka ihu mmadụ 100, ịmata ọdịiche nke onye ọbịa ahụ site n'aka ndị ọzọ na mita 10 ma dị mfe ịnyagharịa n'oge - ha maara oge ha kwesịrị inye nri.
Ihe na-akpata ọrịa nke ọkụkọ na coccidiosis dị ọtụtụ na ọ na-esi ike ịgbaso ọrịa.
Gụkwa maka otu esi emeso ọrịa ọkụ ndị na-adịghị mma na ọrịa na-efe efe.
Ọrịa nje nwere ike ịbanye n'ime nnụnụ ahụ:
site na nri na mmiri emetọ,
site na ahihia oria na ala na ebe obibi nke ọkụkọ,
site na ulo onu na-ejide ya na coccidia.
Ọkụ nwere ike ibute ọrịa ahụ n'ihi mgbanwe nke nri ma ọ bụ nsogbu na-enwe mgbe ahụ obere nnụnụ dị ike. Ahụhụ, ụmụ nnụnụ ndị ọzọ, ụmụ anụmanụ na ọbụna ụmụ mmadụ na-ebugharị ma ọ bụrụ na ha anaghị enyocha nkwenye na ụkpụrụ ọcha maka ilekọta ụmụ nnụnụ ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ.
Mụta otu esi emeso coccidiosis na ọkụkọ na rabbits.
Ngwurugwu ahụ, na-akụtu eriri afọ nke ọkụkọ, na-azụ ya na ọnọdụ dị mma na mgbe ụbọchị 4 gasịrị, ha na-ahapụ ya na ụra na gburugburu ebe obibi dị ukwuu, na-ebute ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! Ihe dị ize ndụ nke coccidiosis bụ na ná mmalite mmalite nke ọrịa, ọkụkọ ahụ ga-ahụ ike. Na mgbe oge a chọpụtara ọrịa ndị ahụ, ọtụtụ ndị mmadụ abanyelarị ọrịa.
Usoro nke coccidiosis na ọkụkọ dị nnọọ njọ. N'ịbụ n'ime eriri afọ, nje ahụ na-ebibi mkpụrụ ndụ epithelial n'ebe ahụ. A na-agbajikwa eguzosi ike n'ezi ihe nke mgbidi obi ya na anụ ahụ ya anwụọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, peristalsis na absorption na-aka njọ, nke na-emetụta ọnụ ọgụgụ nke nri ndị nnụnụ na-enweta ma na-eduga na agụụ na-agụ edema. Na ụbọchị mbụ nke ọrịa (6-8 ụbọchị), ọ dịghị njirimara nke a na-ahụ anya, mana ọ bụrụ na ị hụkwuo ya, ọ nwere ike ịhụ na:
nwa obere anaghị eri nri ma ọ bụ na-eri nri ma ọlị;
anụ ọkụkọ ahụ dị ezigbo mkpa na-adịghị ike, dị iche na nke ọzọ;
ugbo di iche iche agbanweela;
ọkpụkpụ azụ ahụ na-abụkarị ugboro ugboro ma ọ bụ na-adịgide adịgide, mmiri ahụ wee ghọọ mmiri mmiri, ya na nkwonkwo nke ụfụfụ na ọbara;
ozu nnunu ahu wee daa;
a na-agbatị onye na-agba ọsọ;
nnunu ahụ anaghị arụ ọrụ.
A pụrụ ịhụ ihe mgbaàmà ndị a n'elu site na 4 ruo 7 ụbọchị, mgbe nke a gasịrị, ọkụkọ ahụ nwụrụ. N'afọ nke nnụnụ ahụ nwụrụ anwụ na-aza aza ma jupụta n'ụdị mmiri mmiri na-acha uhie uhie.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọkụkọ ahụ bụ broiler breed, mgbe ahụ, otu n'ime ihe mgbaàmà nke ọrịa ahụ ga-abawanye na nri nri na-enweghị uru uru.
Maka ọgwụgwọ ọrịa a dị egwu, a na-eji ọgwụ pụrụ iche - coccidiostatics. A na-agbakwunye ha na-eri nri. Ozugbo n'ime anụ ọkụkọ, ọgwụ ahụ na-egbochi ọrụ nke nje bacteria na-emerụ ahụ, na-akwụsị usoro nke mmepe na mmepụta ha.
Ihe kachasị dị irè bụ ọgwụ ndị na-esonụ:
Aviaks (5%). Maka ọgwụgwọ - 1 g nke ngwaahịa kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Maka nzube prophylactic - 0,5 g nke ngwaahịa kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Ngwado ihe ike - Semduramycin 5%. Usoro maka mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ bụ ụbọchị 5.
"Koktsisan" (12%). Maka ọgwụgwọ - 120 mg nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta ngwakọta. Iji gbochie - 60-120 mg nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Ihe na-eme ihe bụ salinomycin sodium, usoro ahụ si 5 ruo 7 ụbọchị. Nri na ọgwụ a nwere ike iri nri naanị otu ụbọchị.
"Avatek" (15%). N'oge ọgwụgwọ - 1 g nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Maka prophylaxis - 0,5 g kwa 1 n'arọ nke nchịkọta nri. Ihe mgwa ihe na-arụ ọrụ bụ sodium lasalocid 15%, usoro - ụbọchị 5.
Madikox. Na ọgwụgwọ - 0.5-1 g nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta ngwakọta. Na mgbochi - 0,5 g ọgwụ na 1 n'arọ nke ndepụta. Ngwadogwu ihe mgbochi bụ maduramycin ammonium. Usoro ọgwụgwọ na mgbochi sitere na 5 ruo 7 ụbọchị.
"Coccidin-10". Maka nzube prophylactic - 0.5 g nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Maka ebumnuche ọgwụgwọ - 1 g nke ngwaahịa kwa 1 n'arọ nke nchịkọta nri. Ihe mgbochi na-arụ ọrụ bụ iji dochie anya. Ogologo oge ọgwụgwọ ọgwụ dị site na 5 ruo 7 ụbọchị.
"Nicarmiks" (25%). Ọgwụgwọ - 0.5-1 g nke ọgwụ kwa 1 n'arọ nke ndepụta. Mgbochi - 0,5 g nke ọgwụ na 1 n'arọ nke nchịkọta nri. Ngwá ọrụ ọrụ - nicarbazin 25%. Tinye usoro site na 4 ruo 7 ụbọchị. A pụrụ ịmalite ikuku site na ụbọchị mbụ nke ndụ ọkụkọ iji gbochie.
Baycox (2.5%). Maka ọgwụgwọ - 1 ml nke ọgwụ kwa 1 liter nke mmiri ọṅụṅụ. Maka prophylaxis - 0,5 ml nke ọgwụ kwa 1 liter mmiri. Usoro ịṅụ ọgwụ ahụ sitere na ụbọchị 2 (n'ọnọdụ dị nro ma ọ bụ maka mgbochi) ruo ụbọchị ise (n'ọnọdụ dị njọ).
"Koktsiprodin". Maka ebumnuche ọgwụgwọ - 1 ml nke ngwọta kwa 1 liter mmiri. Maka nzube nke prophylaxis - 0,5 ml nke ngwọta kwa 1 l nke mmiri. Ụmụ nnụnụ na-aṅụ mmiri ụbọchị niile site na ụbọchị 2 ruo 5.
"Amprolium". Maka ọgwụgwọ - 0,25 g kwa 1 n'arọ nke ndepụta ngwakọta nke 5-7 ụbọchị. Maka igbochi site na ụbọchị mbụ nke ndụ - 0,1 g kwa 1 n'arọ nke ndepụta maka izu 7-10.
Ọ dị mkpa! Ka ọgwụgwọ wee nwee ihe ịga nke ọma na enweghị nsogbu maka ọkụkọ na-eto eto, ọ dị mkpa iji mee ka ọnụ ọgụgụ vitamin B1 na A dịkwuo nro ka ị na-aṅụ ọgwụ.
N'ọnọdụ nke ọkụkọ na coccidiosis n'otu ugbo ahụ, oge ọ bụla ịchọrọ ịhọrọ ọgwụ nwere ihe dị iche na nke gara aga. Ihe a choro site na ike nke coccidia iji mepee nduzi na iguzogide ọgwụ ndi ozo.
Ọrịa nke ọkụkọ - igbochi na ọgwụgwọ.
Maka ọgwụgwọ nke coccidiosis iji ọgwụgwọ eme ihe:
Nri nke ọkụkọ kwesịrị ịbụ pasent 98% na sulfur 2%. Otú ọ dị, ngwakọta dị otú ahụ, ha agaghị eri ihe karịrị ụbọchị 14, ka ọ ghara ịkpasu ihe rickets.
"Osarol" agbazere na ngwakọta ntụ ọka ahụ ma nye ọkụkọ 10 g kwa 1 n'arọ nke ịdị arọ ndụ. A na-ekekọta ngwakọta nke a n'ime ugboro 2 ma nye nri maka ụbọchị ahụ. A na-eme usoro ahụ ọzọ maka ụbọchị 5, sorochi ezumike ụbọchị atọ, wee maliteghachi ugboro ugboro ugboro anọ na ezumike.
Enweghị ike ịhụ coccidiosis na mmalite nke oria ahụ, ya mere ọ dị mfe igbochi ya karịa inwe oge iji gwọọ nnụnụ site na igbochi ọnwụ ha. Mgbochi mejupụtara iji gbochie ọrịa nke ụmụ nnụnụ nwere nje bacteria na-emerụ ahụ.
Ị ma? Ọ bụrụ na obere nsị nke nje ndị na-emerụ ahụ na-abanye n'ime ahụ ọkụkọ, ọ bụghị nanị na ọ ga-arịa ọrịa, kama ọ ga-aghọkwa nsogbu na coccidiosis. Otú ọ dị, onye ahụ ga-anọgide na-ebute ọrịa ahụ maka afọ ọzọ ma nwee ike ịmịnye anụ ndị ọzọ, ndị nnụnụ na-adịghị ike.
Mgbochi nke coccidiosis gụnyere ihe ndị a:
Site n'oge ruo n'oge, gbaa ụlọ mgbidi ahụ ọkụ na ígwè ígwè, ogige na ngwaọrụ ndị a na-eji arụ ọrụ na nnụnụ iji nyere aka gbuo nje bacteria.
Gbaa mbọ hụ na nnụnụ na-agbaba ọkụ na-adị ọcha.
Tinye shells na tebụl nnu na nri.
Mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi nke ọkụkọ megide coccidiosis. Ọ na - ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma na - eme ka ahụ nwee ikike ịlụ ọgụ na - akpata pests.
A na-agwọkọta ọkụkọ na ala na mpaghara nke ije ije maka ịmịnye ihe na amonia, monochloroxylenol, orthodichlorobenzene, terpineol, orthochlorophenol.
Na-asacha mmiri mmiri na feeder ma kpochapụ ha.
Na-ewepu ala na droppings kpam kpam site na ụlọ ọkụkọ.
Echekwala ọkụkọ na ọkụkọ okenye.
Lelee njirimara na oke nri nke ulo ozuzu okuko.
Ọ dị mkpa! Ntinye protein na-eme ka ọrịa ahụ pụta, n'ihi ya, a ga-ewepụ ya na nri tupu ọgwụgwụ ọgwụgwọ.
Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahụ ga-agbaso iwu niile gbasara nlekọta nnụnụ ma mee ihe iji gbochie coccidiosis, ọrịa a agaghị emetụta ụba ya. Ma ọ bụrụgodị na ọkụkọ adịlarị ọrịa, na-eji usoro nke usoro ọgwụgwọ, ị nwere ike imeri ọrịa ahụ ma zọpụta ndụ ụmụ nnụnụ.
Nsogbu nke coccidiosis bụ nsogbu dị oké njọ, ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ na-erughịrị ya. A na-egbochi coccidiosis (na fodder coccidiostats), a pụkwara igbochi ya. Nnyocha nke ndị ọkà mmụta sayensị na mba ọzọ gosipụtara na, ọtụtụ coccidiostats, iguzogide coccidia sitere na 20 ruo 80%. Dika ihe edere n'akwukwo akwukwo, na Europe, ebe ha na-eji ulo oru nyocha akuko onu ogugu otutu afo, ha agbapuwo coccidiostats. Naanị kwadebe ụlọ dị elu. Ya mere, ọ bara ezigbo uru maka nsogbu ọ bụla. Lezienụ anya maka nkwadebe nke ụlọ ahụ na usoro ọgwụgwọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Mgbochi na disinfection kwesịrị ekwesị bụ nzọụkwụ mbụ iji nweta ahụ ike. Ọ na-esikarị ike ma dị oke ọnụ iji mesoo ya!
A na-ebute ọrịa a siri ike na anụ ụlọ site na nsị site na nri na ihe ndekọ. Ihe na-emetụ ọkụ na-emetụ n'ahụ, adalatala ma nwụọ. Ndị na-akpata ọrịa ọrịa - coccidia - bụ ndị zuru ụwa ọnụ. Ndị a bụ ihe kachasị mfe, nke gụnyere ọtụtụ mkpụrụ ndụ. Ha nile nwere usoro ndụ siri ike. Ọrịa na-eme n'oge ingestion nke oocysts na nri na mmiri. N'otu oge na eriri afọ na-egbuke egbuke, a na-ekpuchi ọkpụkpụ na-egbuke egbuke. A na-ebibi shea ya, na sporozoites, na-abanye n'ime sel epithelial nke eriri afọ, mụbaa. Parasitic, dịka iwu, na eriri afọ. Ufodu coccidia bu ndi mara nke oma, nke bu, ndi nwe nje ahu bu umu umu nnunu, mana enwere ihe ndia. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke pathogens na-akpata coccidiosis dị na ọkụkọ. Otú ọ dị, ọ bụghị ha nile ka a na-amụ nke ọma. Otu n'ime ụdị nke coccidia, bụ Eimeria Tenella, na-eguzogide ọnọdụ ọjọọ gburugburu ebe obibi ma nọgide na-enwe ike ibute ọrịa maka ihe karịrị otu afọ. Ozugbo anụ ọkụkọ, ọ na-amalite n'ime usoro nsì, na-emebi ọrụ nke mgbaze ma na-emerụ akpụkpọ anụ mucous.
Esi eji aka gị mee ihe alpine slide
Kedu akwụkwọ akwukwo bekee na olee otu esi akpọ ya? Nkọwa, foto, na-eto ma na-elekọta
Njirimara ọgwụ nke cumin cine na mmanụ aṅụ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu otu na esi emeso coccidiosis na ọkụkọ